Lamine, oo 44 jir ah, soo -dhoweeyihii hore iyo soo -saaraha webka ee samaynta, oo aan ku qanacsanayn inuu helo shahaadadiisa xagaaga ka hor, ayaa hadda samaynaya waraysiyo shaqo si uu u doorto shirkadda uu raadin doono. kuwaas oo, uu qirayo dhammaan is -hoosaysiinta, waxba ma uu ogayn ilaa dhowaan. La kulan.
"Horumarinta shabakadda, aniga ahaan, waxay ahayd macno ahaan Shiine", Faallooyinka Lamine markii la waydiiyay shuruudaha uu u baahan yahay marka uu gelayo koorsada tababarka ifocop. Maanta wuu ku raaxaysanayaa, laakiin ma qarin taas si uu u raaco tabobarka oo uu u qaato shahaadadiisa, wuxuu ku khasbanaaday inuu ku sii jiro, "Iska ilaali inaad quusato", aqbal inaadan si dhakhso leh wax walba u baran, mararka qaarkood u dhicid ... "Yaa aan waligiis sii dayn" (sic), sidaas uma maqli lahayn.
Waxqabad badan, Lamine waxay ahayd inay difaacdo musharraxnimadiisa oo ay ka gudubto dhowr imtixaan si loogu daro tababarka ifocop. "Waxaa iga go'an inaan raaco tababarkan, dhiirrigelintaydu waxay garaacday sumaddii, waa la iga aqbalay, mana aha inaan ka digay inay aad u daran tahay", ayuu qeexayaa. Ma niyad jabi doono oo si dhaqso ah ayuu u soo ceshan doonaa xawliga waxbarashada sare ee uu sameeyay sanad ka hor.
Lamine: laga bilaabo hudheelada ilaa horumarinta webka, si kalsooni leh Oktoobar 24th, 2021Tranquillus
READ Heerarka tayada adeegga macaamiisha
horeMounir: "Tababarkani wuxuu ii metelayaa nooc ka mid ah guga"
socdaDimitri: "Markii aan noqday horumariyaha webka, waxaan helay luqad cusub"